Mombe dzofa nezvirwere kuMhondoro | Kwayedza
Mombe dzofa nezvirwere kuMhondoro
22 Jun, 2018 - 00:06	 2018-06-21T15:56:16+00:00 2018-06-22T00:04:00+00:00 0 Views
VARIMI vekudunhu reMhondoro votarisana nedambudziko guru rekufa kwemombe nekuda kwezvirwere zvisati zvazivikanwa izvo zvave kukonzera vamwe vavo kuti vadzitengese nekutyira kuzorasikirwa kana dzikafa dzoga.
Nzvimbo dzinonzi dziri kufa mombe dzinosanganisira Gora, Dzapata, Murenha, Rwizi, Mubaira, Neuso, Mukarati neManyewe.
Sabhuku Mhembere, VaRaymond Mutumba Gunha Mhembere (65), vekudunhu raMambo Rwizi vanoti kune misha yakawanda yarasikirwa nemombe dzichingofa dzoga.
“Ichokwadi kune vamwe varimi vedu kuno kuMhondoro vasisina mombe nekufirwa nekuda kwezvirwere zvisati zvave kuzivikanwa. Nzvimbo idzi dzinosanganisira iko kuno kwedu kubva murwizi rwaMupfure kunosvika murwizi rwaMuzvezve. Tinobatawo nzvimbo dzinoti Rukuma, Neuso, Mukarati, Murenha nekumwe kwakawanda uko mombe dziri kungofa. Mombe idzi dzinoonekwa nekuneta nekuzvimba makumbo nemitsipa dzotadza kufamba nekufa ipapo,” vanodaro.
Dambudziko iri vanoti rakatanga mumwedzi waMbudzi gore rakapera apo mombe dzaifa dziri shoma asi dzikazotanga kufa dzakawanda kubva muna Ndira gore rino kusvika izvozvi.
“Handingava nehuwandu chaiho hwemombe dzakafa idzi, asi dzinogona kudarika mazana matatu. Dambudziko ratinaro hatizive kuti mwaka wezhizha unotevera uyu tichange tiine mombe here zvinoreva kuti tichatadza kurima,” vanodaro.
Vanoti ivo sasabhuku vari kuenda kumisangano yakasiyana iri kukurudzirwa varimi kuti vashevedze nyanzvi dzekuchikamu cheDepartment of Livestock and Veterinary Services kana vawirwa nedambudziko rakadai.
Mumwewo murimi akataurwa naye, VaPercy Barnabas Matengarufu Muzah (55), vanoti dambudziko iri rasvika padanho rakaipa zvikuru.
“Mombe dziri kufa muno muMhondoro nzvimbo nenzvimbo, isu tinotopona nekugara tichibaisa mombe dzedu majekiseni nekudhoza asi zvinotaridza kuti dambudziko iri richakura kudarika zvariri,” vanodaro.
Varimi vazhinji vane fungidziro yekuti zvirwere izvi zvingangodaro zvichikonzerwa nezvikwekwe zvinowanda munguva yezhizha.
Vamwe varimi vanonzi vari kutengesa mombe dzavo nemari shoma zvikuru inotangira pa$100 kusvika $200 kana vaona kuti dzabatwa nezvirwere izvi uye zhinji dzacho dzinonzi dzinotengwa nevanoita zvemabhucha. VaTakwana Nhekedza (37) vekwaSabhuku Choga vanotsinhira nyaya yekutengeswa kwemombe mudunhu iri nemari yakadzika zvikuru.
“Mombe dzave kuwanikwa kana ne$100 chaiyo kusvika $200,” vanodaro.
Dr Josphat Nyika vanove mukuru kuchikamu cheDepartment of Livestock and Veterinary Services vanotsinhira dambudziko rekufa kwemombe kuMhondoro.
“Dambudziko rekufa kwemombe iri ririko kuMhondoro uye tine chikwata chenyanzvi dzakashanyira dunhu iri dzichiona mafambiro ari kuita zvinhu. Varimi vari kukurudzirwa kubaisa mombe dzavo majekiseni nekumwaya mishonga inouraya zvikwekwe. Ikurudziro yedu kuti vanhu vasadye nyama yemombe dzinenge dzafa dzoga idzi, zvakatonaka kuti vapise,” vanodaro.
Zvakadai, mombe dzinosvika 2 000 dzinonzi dzakafa kumativi mana enyika nechirwere chinozivikanwa nekuti January disease kana kuti Theileriosis – icho chinokonzerwa nezvikwekwe – kubvira muna Zvita gore rapera kusvika Kurume gore rino.